Nilaza Ilay Teratany Meksikana Mpanoratra Fa Tsy Toy Ny Akanjo Famehy Adala Akory Ny Teny, Fa Fitaovana Entina Hanombohana Resaka Amin’ny Fiteny Roa Samihafa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Jolay 2015 16:53 GMT
Vakio amin'ny teny русский, বাংলা, 日本語, Español, Français, Italiano, English
Sarin'ilay Meksikana mpanoratra antsoina hoe Cristina Rivera Garza nanao lahateny teo anoloan'ny mpanatrika ny hetsika (LéaLA), fetibe fankalazana ny boky amin'ny fiteny Espaniola tao Los Angeles tamin'ny taona 2015. Naka sary: Betto Arcos. Navoaka sy nahazoana alàlana avy amin'i PRI
Nivoaka tao amin'ny PRI.org voalohany indrindra tamin'ny 19 Mey 2015 ity lahatsoratra sy tatitra an'onjam-peo nataon'ilay mpanoratra, William Troop sy ilay mpamokatra, Betto Arcos, ho an'ny The World ity , ary averina avoaka eto indray mba ho ampahany amin'ny fifanarahana amin'ny fifampizaràna votoaty.
Teratany Meksikana mpanoratra sy mpampianatra i Cristina Rivera Garza ary sady nanitatra ny fahaizany tany Etazonia no tao Meksika. Nibatàny amboara teo amin'ny literatiora tao Meksika ireo tantara noforoniny tamin'ny fiteny Espaniola, efa nampianatra nanoratra tao Meksika sy Etazonia izy.
Ka hainy tsara hoe toy ny ahoana izany miasa sy manoratra amin'ny fiteny Espaniola sy Anglisy izany. Tafaresaka taminy ilay mpamokatra antsoina hoe Betto Arcos nandritra ny fotoana nanaovana ny hetsika LéaLA, fetibe fankalazana ny boky amin'ny fiteny Espaniola tao Los Angeles, nanontany azy ity farany hoe toy ny ahoana izany mpanoratra nahavoaka ny sanganasany amin'ny fiteny roa samihafa izany, ary ahoana no fiantraikan'ny niainany tamin'ireo firenena roa ireo tamin'ny asany. Ity manaraka ity ny dika nalaina avy amin'ny tafatafan'izy ireo .
Cristina Rivera Garza: Teratany Meksikana mpanoratra aho ary nipetraka tao Etazonia nandritra ny 25, 26 taona farany teo. Norteña aho ao Meksika, Teraka tao Matamoros, Tamaulipas. Tanàna any ambadikin'ny sisintany amin'ny ilany miala avy ao Brownsville, Texas. Dia nipetraka tao San Diego, California ihany koa aho, nandritra ny taona maromaro izay any amin'ny tendrony ilany amin'ilay sisintany ihany.
Hitanao, nataoko tamin'ny fiteny Espaniola ny ankamaroan'ny sanganasa noforoniko. Ary navoakako tamin'ny fiteny Anglisy kosa ny ankabeazan'ny asa nataoko tany am-pianarana. Hitako fa mety tsara io fomba fizarazaràko azy io aloha hatramin'izao. Fa nandritra ny 7 taona lasa nampianaraka tao amin'ny fandaharam-pianarana MFA momba ny haisoratra araham-pamoronana, tao amin'ny Anjerimanotnolon'i California-San Diego, dia saika tamin'ny teny Anglisy no ankamaroan'ny fampianarako. Ahitsiko kely, tsy hoe ny ankamaroany fa tena io ihany. Dia izay no mahasamihafa azy, teratany Meksikana sy mpanoratra boky amin'ny fiteny Espaniola no fahitako ny tenako ary toy ny olona avara-pianarana mipetraka ato anatin'ny kaontinanta fa manoratra amin'ny fiteny anglisy — somary voafolaky ny toe-javatra niainako izany rehetra izany. Mazava be, efa ela loatra aho no nipetraka teto ka nanoratako ihany koa tamin'ny fiteny anglisy, safidiko manokana no tsy hamoaka azy. Kanefa mety hiova izany ao aoriana kely ao.
Betto Arcos: Inona no tinao hambara amin'ilay hoe vofolaka? Inona izany toe-javatra niainanao izany?
CRG: Hay, noraisiko ho tena zava-dehibe, ary tiako ho tazonina hatrany, ny fifampiresahana amin'ny literatiora Meksikana, ny fifaneraserana amin'ireo teratany Meksikana mpanoratra, ary hatramin'ireo teratany Meksikana mpamaky ihany koa. Kanefa amin'ny maha-efa ela ny nipetrahako teto, tsy maintsy nataoko an-tsaina ny hoe tsy teratany Meksikana ihany akory ireo mpamaky aty amin'ity ilan'ny sisintany ity fa ao ihany koa ireo Meksikana izay mahay mamaky teny anglisy sy Espaniola. Amiko dia lasa karazana hetsika fanentanana fotsiny ihany izy io, fampafantarana ny toerana misy ahy sy ny karazana adihevitra fanakianana tiako idirana. Miankina amin'izay mantsy no ahafahako mamolaka ny fomba fijeriko manokana. Hitanao izay fahasamihafàn'ny teratany Meksikana mpanoratra izay, izay mamoaka ny sanganasany amin'ny fiteny Espaniola, sy ny mpampianatra izay mahavita mamokatra ny azy sady amin'ny fiteny Espaniola no amin'ny fiteny Anglisy — misy dikany tsara mihitsy izany, sady tsotra kely ihany koa. Kanefa mandritra izay fotoana izay, tsy mbola maharakotra ny olana saro-bahàna ananan'ny tontolo mis antsika amin'izao vanim-potoana izao io, sy ny politika mifamatotra amin'ny toerna misy ny tany misy ahy amin'izao fotoana izao. Noho izany ilaina ny fiovan’ izany, ary dia tena niova tokoa moa.
BA: Rariny ve raha tenenina hoe manana fomba fieritreritra hafa ianao rehefa manoratra amin'ny fiteny Anglisy, ary iray hafa koa ampiasainao rehefa manoratra amin'ny fiteny Espaniola ? Inona no maha samihafa azy roa ireo?
CRG: Tsara mihitsy izany fanontaniana izany, ary iray tena saro-baliana ihany koa. Raha ny eritreritro dia vao haingana kely no nahatsapako ny fahasamihafan'izy ireo, rehefa injay aho voatery tsy maintsy hamantatra ny zava-misy. Izany hoe, nanoratra tamin'ny fiteny Espaniola momba ny zavatra iray hita maso azo tsapain-tanana aho, ka raha vao namaky azy tsara aho, ary raha vao niezaka nanao ny fandikàna azy io ho amin'ny fiteny anglisy ireo mpandika teny sasantsasany, dia tsapako fa matetika aho manoratra ny dika-teny orizinalin'io zavatra io amin'ny fiteny Anglisy sy Espaniola. Ohatran'ny hoe izy io no tena mamehy ny (ADN) tarazon'ny resaka fanoratana. Araka izany dia tsy misy toerana na koa efitrefitra manokana ho an'ny tsirairay amin'ireo fiteny ireo. Toy ny onja ny fiavian'izy ireo, ary mifamatopatotra tanteraka. Ny fanontaniana tsara apetraka eto dia mirona bebe kokoa any amin'ny hoe olona iza no tiako hanaovana izany resaka izany, fa tsy hoe karazan-javatra toy inona no iasàko akaikikaiky bebe kokoa.
Taorian'izay dia nanoratra tamin'ny fiteny roa samihafa aho nandritra ny taona maromaro. Fa tamin'ny fiteny Espaniola no namoahako izany satria io no resaka tiako amporisihana. Ary [ankehitriny] mahatsapa harena lehibe aho eo amin'ny fiainako nohon'ny famporisihako ny karazana resadresaka toy io izay nifanaovako tamin'ireo mpamaky avy amin'ity ilan'ny sisintany ity izay mety mahay mamaky azy amin'ny fiteny Espaniola sy Anglisy.
Ary tsy miresaka momba ny fahafehezako ireo fiteny roa ireo aho. Fa miresaka momba ny fakàna na findràmana ny endriky ny fiteny Anglisy, sy ny fiteny Espaniola, ary ny fampitambàrana azy roa ireo amin'ny fomba izay na izaho aza mety tsy voatery ho niandrandra azy akory. Ny zavatra tadiaviko ankehitriny dia ny hanomboka fotsiny hamporisika sy handray anjara mavitrika amin'ny fifampiresahana iray miaraka amin'ireo lehilahy sy vehivavy miaina eto amin'ny firenena. Efa ela loatra aho no nipetraka teto, ary ho ahy dia toy ny hoe niandriandry izany aho, niadana loatra ny fomba fiasako ary efa fotoana izao ho ahy.
BA: Zavatra tena mahaliana loatra izany lazainao izany. Satria rehefa manoratra aho, na koa rehefa miezaka mampita zavatra, dia misy fomba maro ahafahako milaza izany amin'ny fiteny Anglisy. Kanefa rehefa miezaka mandika izany amin'ny fiteny Espaniola aho, dia matetika tsy mety loatra ny filazako azy. Afaka zarainao ve ny traikefanao eo amin'izay lafiny izay?
CRG: ie, fa mety foana ny zava-drehetra rehefa atao rehefa terena ho mety — Izay mihitsy no nitranga tamiko. Rehefa tsy manaraka fotsiny ny fitsipika amin'ny fiteny, ny endriny, ny firafiny, ary ny rarinteny izay napetraka na koa ny fiforonany manokana izay natolotra ahy aho dia sendra olana foana. Ary misy fotoana tsapako goavana loatra ilay izy ka henoko lasa malemy mihitsy aho! Moramora kokoa sady mampisy hery kokoa ahy rehefa alefako manaraka ny onja fotsiny ilay izy, dia manomboka manoratra amin-toky izay mifanaraka amin'ny fomba fijeriko manokana aho, sy izay tsapan'ny vatako amin'ny zavatra mitranga eo amin'ny tontolo manodidina ahy amin'io fotoana io.
Ka mino aho fa izay ilay fiovana noresahako teo. Raha tokony handray ny fiteny ho akanjo famehy adala aho, na koa fitsipika napetraka tokony arahako, dia tena ilaina izay noresahako, tena mifanaraka amin'ny zavatra tiako hampitaina, ary izay karazana fitaovana tiako ho zaraina. Dia izay no nataoko, mety tsy lavorary tanteraka ny fanoratako ny fiteny Espaniola na Anglisy. Nefa kosa rehefa manoratra isika dia tsy dia miasa saina loatra amin'ny fahaizana mamolaka izany na ny fanindriana ny hafa na koa ny fahazoana toerana ambony. Rehefa manoratra isika, miresaka ny tena hevitra lalina fonosin'ny fifaneraserana, fomba lalindalina kokoa ifandraisana amin'ny olon-kafa. Ary izay no hifantohan'ny saiko amin'izao. Ny karazana fomba ahafahana manatanteraka tahaka izany.